Monday February 24, 2020 - 20:26:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
ugu yaraan 29 qof Ethiopian ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen weerarkan kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka waxaana lagusoo waramayaa in qaar kamid ah dadkaasi xaaladooda laga dayrinayo.
Warbahinta gudaha ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay in qaraxa lagu weeraray isku soo bax ay dhigayeen taageerayaasha Raysal Wasaare Abiy Axmed, maadama ay soo dhowdahay doorashada dalka Ethiopia taas oo la qaban doono bisha August ee soo socota.
Taliyaha police-ka gobolka Oromiya ayaa ka dhawaajiyay in ku dhawaad 20 qof oo kamid ah dadkii ku dhawacmay weerarka ay xaaladooda soo hagaageyso halka ay jiraan tiro kale oo halis ah wuxuuna carrabka ku dhuftay in illaa lix qof loo xiray kiiskaasi.
Raysal Wasaare Abiy Axmed ayaa la qorsheynayay in uu soo xaadiro goobta uu qaraxu ka dhacay balse waxaa la xaqiijiyay inuusan fagaaraha ku sugneyn xiliga uu weerarku dhacayay ilaa hadana ma cada cida sida tooska ah loo bartilmaameedsaday.
Lama oga cidda sida rasmiga ah kaga danbeysay weerarka qararaxa ah ee ka dhacay gudaha dalka Ethiopia, balse dalkan ayaa 2di sanadadi ee lasoo dhaafay marti galiyey weeraro iyo is qabqabsi u dhexeeyo qowmiyadaha halkaas wada daga dad badan ayaana isweydiinaya qaabka ay ku dhici doonto doorashada la qorsheynayo Bisha August ee soo socota.
Waa weerarkii labaad oo lala beegsado Isku baxyada lagu taageerayo Abiy Axmed waxaana la xasuusta in sidan oo kale 23kii Bisha June sanadki 2018ka, uu Raysal wazaaraha Ethiopia ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa, kaas oo ka dhacay fagaaraha Meskel ee kuyaala bartamaha Addis Ababa, halkaas oo ay ku dhinten tiro dad ah, kuwa kalena ay ku dhawacmeen.